Articles tagged 'premier african minerals'
Premier in debt-equity deal with director 22 November 2018 HARARE - Premier African Minerals says it has converted a $300 000 loan availed by chief executive George Roach into equity. Last week, the company's board agreed to amend terms of the existing loan agreement by granting conversion rights with respect to the entire loan amount in return for ca...
Premier raises $1m to kick-start operations 15 August 2018 HARARE - London Stock Exchange-listed resources firm Premier African Minerals Limited (Premier) yesterday said it plans to raise close to $1 million earmarked for the resuscitation of its tungsten mine in Zimbabwe. The miner's operations were halted towards the end of last year amid cash flow ...
British firm commences diamond drilling in Zim 20 September 2016 HARARE - British miner Premier African Minerals (Premier) said it has commenced an extensive diamond drilling programme on its Zulu Lithium Project in Zimbabwe. The programme, which Premier said will be on the largest undeveloped lithium-enriched resource in Zimbabwe, is aimed at testing for s...
Premier commences production 7 July 2016 HARARE - London-listed resources firm Premier African Minerals (Premier) said it will start production at its RHA tungsten project in Zimbabwe on Monday next week. The company's chief executive, George Roach, yesterday said screens and plant modifications are now at site and installation is pr...
Premier eyes first profit from Zim operations 9 December 2015 HARARE - London-listed resources company, Premier African Minerals (Premier), is expecting to register profit at its RHA Tungsten Mine in Zimbabwe in the first quarter of 2016 having opened the mine in “trying times”. The miner recently told shareholders in a corporate update about some of the...
Premier African's tungsten project on course 6 April 2015 HARARE - Premier African Minerals (Premier) says it remains on course to start its first tungsten production in Zimbabwe by June this year. George Roach, Premier chief executive, said the mining firm has started to strip the waste at its RHA tungsten project, while plant fabrication is on sche...
Premier discovers new tungsten reserves 23 October 2014 HARARE - London-listed resources group Premier African Minerals (Premier) has extended its Zimbabwean tungsten mine’s lifespan by nine years after a study indicated more reserves. A recent survey of Premier’s tungsten project by Bara Consulting highlighted increased resources, almost doubling ...